Beauty Valley ( I ) | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Beauty Valley ( I ) | Thingangyun
Beauty Valley ( I )
Beauty Valley ( I ) ကို အမှတ် F13 ၊ ပထမထပ် ၊ AKK Shopping Mall ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် 2015 ခုနှစ်မှ July လတွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ထား ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ခွဲ အနေဖြင့် သုံးဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ ဆိုင်တွင် ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုများမှာ Hair Treatments and service ( including cut, color, shampoo, waxing and so on.) ၊ Facial treatments ၊ Make-up service ၊ Body Massage၊ Foot massage၊ waxing ၊ Body Spa (Milk Spa, Thai Cucumin Spa, The Body Shop, OPI, Cuccio Body Spa) ၊ Nail arts ( Acrylic Nail Extension, various nail colors) ၊ Eye Brow ၊ Eyelash Extension နှင့် အခြားအလှအပရေးရာ အဖြာဖြာကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံလင်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဆိုင်၏အပြင်အဆင်မှာ အထူးကောင်းမွန်ပြီး အသုံးပြု သည့် ဆေးအမျိုးအစားများမှာလည်း နာမည်ကြီးတံဆိပ်များဖြစ်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းများမှာလည်း ဖေါ်ရွေပြီး Service တိုင်းကို အကောင်း ဆုံး ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိ ပါသည်။ ဈေးနှုန်းများ အနေဖြင့်လည်း အသက်သာဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေး ထားပါသည်။ Promotion အစီအစဉ် များစွာကိုလည်း လစဉ် ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းများကို Beauty Valley ဆိုင်များ သို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခေါက်လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ၉နာရီမှ ည ကိုးနာရီအထိဖြစ်ပြီး ပိတ်ရက်မရှိပါ။
F.13, 1st Floor AKK Shopping Mall, Laydauntkan Road, Thingangyun Township,Yangon
အနီးအနား ဘုရားလမ်း မှတ်တိုင် 10 မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Beauty Valley ( I ) Beauty Valley ( I ) was established in July 2015 and located at F.13, 1st Floor AKK Shopping Mall, Laydauntkan Road, Thingangyun Township, Yangon. There are three outlets in Yangon as Beauty Valley Branches. This salon provides Hair Treatments and service ( including cut, color, shampoo, waxing and so on.), Facial treatments ,Make-up service, Body Massage, Foot massage, waxing, Body Spa (Milk Spa, Thai Cucumin Spa, The Body Shop, OPI, Cuccio Body Spa), Nail arts ( Acrylic Nail Extension, various nail colors), Eye Brow, Eyelash Extension and other beauty related services with effective high quality hair & skin products. Interior Decorations of this salon are really eye catching and high class. They use high quality hair & skin products for all services. The staffs are polite, friendly and well trained services for valuable customers. Various promotion programs are available and opening Hour is 9:00 AM to 9:00 PM for all days. You are invited to visit this beauty valley and enjoy.
Iris Hair Design ( Thingungyun Branch )
T8 Hair Design (Akk Shopping Mall)